Nubia Z20 ayaa 14-ka Oktoobar ka bilaabeysa Yurub si rasmi ah | Androidsis
Nubia Z20 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Yurub
Nubia Z20 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay bishii Ogosto ee la soo dhaafay, sida taleefanka cusub ee labada shaashad leh ee shirkaddu ku shaqeyso. Telefoon casri ah, oo leh laba shaashad, oo shaki la'aan noqon kara sharad xiisaha suuqa. Markii la soo bandhigayay, wax faahfaahin ah lagama bixinin soo-saarista aaladda Yurub, markaa ma aanan ogeyn haddii la soo saarayo iyo in kale.
Ugu dambeyntii, waan arki karnaa iyo xaqiiji in Nubia Z20 laga bilaabi doono Yurub. Shirkadda lafteeda ayaa horeyba u xaqiijisay dhammaan faahfaahinta ku saabsan soo saarista qalabkan laba-shaashadda ah ee qaaradda. Markaa haddii aad xiisaynaysay, waxaan hore u ogaanay goorta laga filayo.
Sida ay shaaca ka qaadeen shirkadda, Nubia Z20 waxay bilaabi doontaa Oktoobar 14 Mareykanka, Kanada, Boqortooyada Ingiriiska, iyo Midowga Yurub guud ahaan. Marka wali waxaan haysanaa sedex usbuuc ilaa heerkaan sare si rasmi ah loogu iib geeyo wadankeena.
Laga soo bilaabo waxa ilaa hadda la ogaa, waxaa lagu sii deyn doonaa hal nooc. Waa nooca leh 8/128 GB oo aan horeyba ugu arki jirnay soo bandhigida qalabka. In kasta oo aan yeelan doonno laba midab oo aan kala dooran karno, oo noqon doona buluug iyo madow, oo leh magacyo Twilight Blue iyo Diamond Black.
Mid ka mid ah shakiga, oo aan weli la xallin, waa qiimaha Nubia Z20 uu ku yeelan doono furitaankiisa Yurub. Qiimaheeda Shiinaha wuxuu ku saabsan yahay 470 Yuuroo si loo beddelo, laakiin waxay u badan tahay inuu ku dambayn doono xoogaa qaali ah markii laga bilaabo Yurub saddex toddobaad gudahood.
Waxay u badan tahay, toddobaadyadan kahor intaan la soo saarin waxaan haynaa dhammaan xogta. Laga soo bilaabo waxa aan ku ogaan doonaa waa imisa qiimaha Nubia Z20 markii la bilaabay Yurub. Telefoon casri ah, oo ay ugu mahadcelinayaan shaashadiisa laba-geesoodka ah, sidaas darteed waxay leedahay fursado badan oo suuqa ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nubia Z20 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Yurub
Shirkadda PUBG waxay kor u dhaaftay $ 1.000 bilyan oo dakhli ah
Exynos 9611: processor-dhexdhexaad-dhexdhexaad ah oo lagu taageerayo kamaradda 64 MP